Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London | The Official Blog Of Dr Chit Nge (© 2009 – 2017. All Rights Reserved) | Page 2
ကျွန်တော် ၀ုဏ်းလေးပါ။ ကျွန်တော့် အင်္ဂလိပ်စာကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က အားမရဘူး။ ဒီတော့ နီးစပ်တဲ့ မြတ်သူအောင်ကို ကျွန်တော်ပြောတယ် “ငါ အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်ချင်တယ်ကွာ” ဆိုပြီးပြောတယ်။ မကြာပါဘူး မြတ်သူအောင်က အသံဖိုင်ကို Memory Stick နဲ့ ယူလာပေးတယ်။ ကျွန်တော် အချိန်ရတဲ့အခါကျ အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း နားထောင်ကြည့်တာပေါ့နော် – အဲဒီအထဲမှာ အကြံပေးထားတာ တစ်ခုရှိတယ် “တွေးရင် အင်္ဂလိပ်လို တွေးပါ” တဲ့ — ကျွန်တော်က ဒီအကြံဉာဏ် ပေးမှုကို မှန်ကန်ကြောင်း လက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကျ ကျွန်တော်က အင်္ဂလိပ်လို မတွေးနိုင်ဘူး ကျွန်တော်တွေးရင် ဗမာလိုပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ဒီတော့ မှန်ပေမယ့် လိုက်မကျင့်နိုင်တဲ့ အဲဒီသဘောတရားရေးရာ Continue reading →
အခမ်းအနားစတင်သည့်အချိန်မှစပြီး Live ကို Youtube မှ တစ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါလင့်ခ် တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ နေ့ရက် အချိန်ကို သတိပြုပါရန်။
လေ့လာသိရှိ တွေ့သိခဲ့ရသလောက်တော့ အနော်ရထာ လက်ထက်က ဘုရားတွေ တအားတည်တာပဲ။ ဘုရားတည်ပုံရတယ်။ အနော်ရထာ တည်တဲ့ဘုရား မရှိတဲ့ဒေသကတော့ တော်တော့်ကို ရှားတာကို တွေ့ရတယ်။ ဘုရားတည် တော်တော်ဝါသနာပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲ။
ဘုရင့်နောင် လက်ထက်မှာ အတော်ပြတ်သား ပိုင်းခြားတာပဲ။ အကုန်လုံး ဖြတ်တောက်ပစ်တဲ့ သဘောပဲ။ ဖြတ်တောက်ခြင်းကတော့ စံနမူနာ တင်လောက်အောင် သမိုင်းဝင်ပါပဲ။
အလောင်းဘုရား လက်ထက်မှာတော့ စစ်တိုက်တော်တော် ၀ါသနာပါပုံရတယ်။ စစ်ရေးတွေပဲ တိုက်နေတာပဲ။ တိုက်ရေးခိုက်ရေးကို တော်တော့်ကို ၀ါသနာပါပုံရတယ်။ ဇွတ်နှစ်ပြီးတော့ တိုက်တဲ့သဘောပဲ။ ယိုးဒယားက သက်သေခံနေတာပဲ။
ဒါတွေ လေ့လာ သိရှိခဲ့ရတယ်။
ဒေါက်တာချစ်ငယ် တစ်ယောက်ကတော့ တရားတွေ စွတ်ထိုင်တာပဲ။ အရမ်းထိုင်တာပဲ ထိုင်ကို ထိုင်တယ်။ အပြတ်အသတ်ပဲ။
ဒါတွေကို လေ့လာသိရှိရကြောင်း သတင်းကောင်း ပေးပါတယ်။
မေး။ ။ဆရာကြီး ကျွန်တော်လာပြီ
ဖြေ။ ။အေး ကောင်းတယ်။
မေး။ ။ကျွန်တော်တော့ တရားတော်ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့် ထင်တယ်ဆရာကြီးရယ် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ စိတ်လက်ပေါ့ပါးပြီးတော့ ပျော်နေတယ်။ ဆရာကြီး ဒါ တရားတော်ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးပေါ့နော်။
ဖြေ။ ။တရားတော်ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးကတော့ Continue reading →
မေး။ ။ဆရာကြီး ကျွန်တော်လာပြီ။
ဖြေ။ ။အေး လာ။
မေး။ ။ ကျွန်တော် အရင်က ပေါ်တဲ့စိတ်ကို ကြောက်ကြောက်နေတာ ဆရာကြီးရယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ အခေါက်က ဒါတွေက ပျက်ဆို့ဖြစ်လာတာဆိုတော့ ကျွန်တော် တော်တော်ခံသာ သွားတယ်။
ဖြေ။ ။ပေါ်တဲ့စိတ်က ကြောက်စရာ မလိုပါဘူး။ သူက (Natural Given) ခေါ်တယ်။ ပေါ်တာတော့ ပေါ်မှာပဲ။ သူ့ကို ဟန့်တားလို့ မရဘူး။ ကိုယ်က ရှုလိုက်ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ် – ဒါ အပျက်လို့ – အဲဒါ (Man Made) ပေါ့နော်။ (Man Made) ကိုဂရုစိုက်၊ (Natural Given) ကို ဂရုမစိုက်နဲ့။ သူကတော့ ပေါ်မှာပဲ။ စိတ်ဆိုတာက ကောင်းတာမှ မဟုတ်ဘဲနဲ့။ ပေါ်ချင်ရာ ပေါ်မှာပဲ။ ဒီတော့ Continue reading →
Tags: ၀ိပဿနာ, Myanmar Posts
မေး။ ။ဆရာကြီးခင်ဗျာ ကျွန်တော်ရောက်လာပါပြီ။
ဖြေ။ ။ကောင်းသော ရောက်ခြင်းပါပဲ။
မေး။ ။ဆရာကြီးကို သတိရတဲ့အခါ ကျွန်တော်က ဖြစ်ပျက် ရှုပါတယ်။
ဖြေ။ ။ဖြစ်ပျက် ရှုတာတော့ အမှန်အကန်ပဲလေ၊ အကျိုးလည်း ရှိတာပဲ။ ဖြစ်တာတွေက ပျက်ဖို့ပဲ —
မေး။ ။ခင်ဗျာ ဆရာကြီး။
ဖြေ။ ။အော် ဖြစ်တာတွေက ပျက်ဖို့ပဲ။ ပျက်ဖို့ ဖြစ်လာတာ – Continue reading →
မေး ။ဆရာကြီး ကျွန်တော် တရားအားထုတ်လို့ကောင်းတယ်။
မေး ။တစ်ချို့လောကဓံတွေလည်း ပြေသွားပါပြီ။
မေး ။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ကို မေးကြတယ် ဆရာကြီးရယ် ကျွန်တော်က ၀ိပဿနာကျင့်တာ ဉာဏ်နဲ့ရှုတယ်ဆိုတော့ ဉာဏ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုးလည်းလို့ မေးတယ်။
ဖြေ ။ဉာဏ်ဆိုတာ စိတ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဒြပ်မဲ့အသိပညာပေါ့။
မေး ။အော် – စိတ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဒြပ်မဲ့အသိပညာ – Continue reading →
မေး ။ဆရာကြီး မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်လာပြီ။
မေး ။ဆရာကြီး ကျွန်တော် အစစအရာရာ ပြေလည်သွားပြီ။
မေး ။ဆရာကြီးရယ် တစ်ချိန်ကျတော့လည်း ပြေလည်တာပဲ။
ဖြေ ။အေးပေါ့ – အတည်အမြဲတော့လည်း ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။
မေး ။ဆရာကြီး ကျွန်တော်တရားရှုတာ တရားက တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေနေတယ်။
ဖြေ ။ကောင်းတာပေါ့ တရားက အကောင်းဆုံးပဲ။
မေး ။အကောင်းဆုံးပဲနော် ဆရာကြီး၊ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့က ကောင်းတယ်ဆိုတာကို မပြောရဲကြဘူး။ တရားကောင်းတာကို မပြောရဲကြဘူး။
ဖြေ ။အဲဒါ မှားတာပေါ့ တရားဟာ ကောင်းတာက ကောင်းတာပဲပေါ့။ အရသာအားလုံးမှာ တရားအရသာဟာ အကောင်းဆုံးလို့ အဆိုရှိတယ်။ အော် – အရသာဆိုလို့ Continue reading →
မေး ။ မင်္ဂလာပါ ဆရာကြီး။
မေး ။ ကျွန်တော့် လောကဓံက အရှိန်သေသွားပြီ။
ဖြေ ။ အေး အရှိန်သေသွားလည်း ကောင်းတယ်၊ ပြီးတယ်။ လောကဓံဆိုတာ အရှိန်တက်လာလိုက်၊ အရှိန်သေသွားလိုက် ဒီလိုပါပဲ။ ဒီအပေါ်မှာ မမှီခိုနဲ့။
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာကြီး ကျွန်တော် မမှီခိုဘူး၊ ဥပက္ခာပြုပါမယ်။ ကျွန်တော် ကြိုးစားပါတယ် ဆရာကြီး။ ကြိုးစားတဲ့အခါ ကျွန်တော့်ဉာဏ်ဟာ ခန္ဓာထဲ စူးဝင်သွားသလိုပဲ။
ဖြေ ။ စူးဝင်ရုံနဲ့မရဘူး ဟိုဘက်ကို ပေါက်ထွက်မှ ရတယ်။
မေး ။ ပေါက်ထွက်ရဦးမှာလား ???
ဖြေ ။ ပေါက်ထွက်ရမှာပေါ့။ တစ်ခုတစ်ခုနဲ့ တစ်နေရင် – ဒါ အထွတ်အထိပ်နဲ့ အောင်မြင်တယ်လို့ ဘယ်ခေါ်မှာလည်း။ ပေါက်ရမယ်။
မေး ။ ဟာ ဆရာကြီး – ကျွန်တော် ဆက်တော့ ကြိုးစားဦးမယ်။ အခုတော့ စူးတာတော့ နည်းနည်းသိပြီ။
ဖြေ ။ အေး နည်းနည်းသိတာ များများသိအောင်လုပ်။ ပေါက်ထွက်အောင်လုပ်၊ ဘာမှ အဖုအထစ် မရှိစေနဲ့။ အခုအခံ မရှိစေနဲ့။ စင်းလုံးချော ပေါက်သွားမှ – ဓမ္မာနုပဿနာ အထိလည်း ရောက်နိုင်တယ် – ကြိုးစား။
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီး ကြိုးစားပါ့မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် နေပါပြီ။
ဖြေ ။ ကောင်းတာပေါ့။ ဉာဏ်ရောက်ပြီး ခန္ဓာကို ဉာဏ်က နိုင်ရမယ်။ နိုင်ရင် လက်ခမောင်း ခတ်တော့ —
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီး။ ကျွန်တော် လက်ခမောင်း ခတ်ချင်လှပါပြီ။
ဖြေ ။ လက်ခမောင်း ခတ်ချင်ရင်ကြိုးစား၊ အကုန်နိုင်အောင် ကြိုးစားရှု၊ ကြိုးစား။ ဘာမှ သိပ်အကြောင်း မပြုနဲ့တော့။ ဒါတွေက ဒီလိုပဲ တ၀ဲလည်လည် ဖြစ်နေမှာ။ ရုပ်နာမ်ရှိသမျှ ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ – ရုပ်နာမ်ချုပ်ရာ နိဗ္ဗာန်ကိုသာ ဦးတည်ပြီးတော့ သွားတော့။
မေး ။ ကောင်းပါပြီ ဆရာကြီးရယ်။ နိဗ္ဗာန်ကြ ချမ်းသာမှာပေါ့နော် —
ဖြေ ။ ဟာ ချမ်းသာတာပေါ့။ နိဗ္ဗာနံ ပရမံသုခံဆိုတာ ချမ်းသာခြင်း အစစ်က နိဗ္ဗာန်မှာရှိတာ။ ဒီမှာ မရှိဘူး။ ဒီမှာသွား မှီခိုနေ တစ်နေရင် အစစ်ကို မရောက်ဘဲ နေလိမ့်မယ်။ အတုနဲ့ပဲ ပြီးနေလိမ့်မယ်။ အစစ်ရောက်အောင် ထိုးဖောက်ပေတော့။
မေး ။ ကောင်းပါပြီ ဆရာကြီး။
ဖြေ ။ အောင်မြင်အောင် ဖောက်နော် —
မေး ။ အောင်မြင်အောင်ကို ဖောက်ပါ့မယ် ဆရာကြီး။ အပြတ်အသတ် လုပ်ပါ့မယ် ဆရာကြီး။
ဖြေ ။ အေး အပြတ်အသတ် အောင်ပွဲခံချင်ရင် အပြတ်အသတ် လုပ်ရတာပေါ့။
မေး ။ မင်ျဂလာပါ ဆရာကွီး။
မေး ။ ကြှနျတေျာ့ လောကဓံက အရှိနျသသှေားပွီ။
ဖွေ ။ အေး အရှိနျသသှေားလညျး ကောငျးတယျ၊ ပွီးတယျ။ လောကဓံဆိုတာ အရှိနျတကျလာလိုကျ၊ အရှိနျသသှေားလိုကျ ဒီလိုပါပဲ။ ဒီအပျေါမှာ မမှီခိုနဲ့။
မေး ။ ဟုတျကဲ့ ဆရာကွီး ကြှနျတျော မမှီခိုဘူး၊ ဥပက်ခာပွုပါမယျ။ ကြှနျတျော ကွိုးစားပါတယျ ဆရာကွီး။ ကွိုးစားတဲ့အခါ ကြှနျတေျာ့ဉာဏျဟာ ခန်ဓာထဲ စူးဝငျသှားသလိုပဲ။
ဖွေ ။ စူးဝငျရုံနဲ့မရဘူး ဟိုဘကျကို ပေါကျထှကျမှ ရတယျ။
မေး ။ ပေါကျထှကျရဦးမှာလား ???
ဖွေ ။ ပေါကျထှကျရမှာပေါ့။ တဈခုတဈခုနဲ့ တဈနရေငျ – ဒါ အထှတျအထိပျနဲ့ အောငျမွငျတယျလို့ ဘယျချေါမှာလညျး။ ပေါကျရမယျ။
မေး ။ ဟာ ဆရာကွီး – ကြှနျတျော ဆကျတော့ ကွိုးစားဦးမယျ။ အခုတော့ စူးတာတော့ နညျးနညျးသိပွီ။
ဖွေ ။ အေး နညျးနညျးသိတာ မြားမြားသိအောငျလုပျ။ ပေါကျထှကျအောငျလုပျ၊ ဘာမှ အဖုအထဈ မရှိစနေဲ့။ အခုအခံ မရှိစနေဲ့။ စငျးလုံးခြော ပေါကျသှားမှ – ဓမ်မာနုပဿနာ အထိလညျး ရောကျနိုငျတယျ – ကွိုးစား။
မေး ။ ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာကွီး ကွိုးစားပါ့မယျ။ ကြှနျတျောကတော့ ခန်ဓာဉာဏျရောကျ နပေါပွီ။
ဖွေ ။ ကောငျးတာပေါ့။ ဉာဏျရောကျပွီး ခန်ဓာကို ဉာဏျက နိုငျရမယျ။ နိုငျရငျ လကျခမောငျး ခတျတော့ —
မေး ။ ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာကွီး။ ကြှနျတျော လကျခမောငျး ခတျခငျြလှပါပွီ။
ဖွေ ။ လကျခမောငျး ခတျခငျြရငျကွိုးစား၊ အကုနျနိုငျအောငျ ကွိုးစားရှု၊ ကွိုးစား။ ဘာမှ သိပျအကွောငျး မပွုနဲ့တော့။ ဒါတှကေ ဒီလိုပဲ တဝဲလညျလညျ ဖွဈနမှော။ ရုပျနာမျရှိသမြှ ဖွဈနမှောဆိုတော့ – ရုပျနာမျခြုပျရာ နိဗ်ဗာနျကိုသာ ဦးတညျပွီးတော့ သှားတော့။
မေး ။ ကောငျးပါပွီ ဆရာကွီးရယျ။ နိဗ်ဗာနျကွ ခမျြးသာမှာပေါ့နျော —
ဖွေ ။ ဟာ ခမျြးသာတာပေါ့။ နိဗ်ဗာနံ ပရမံသုခံဆိုတာ ခမျြးသာခွငျး အစဈက နိဗ်ဗာနျမှာရှိတာ။ ဒီမှာ မရှိဘူး။ ဒီမှာသှား မှီခိုနေ တဈနရေငျ အစဈကို မရောကျဘဲ နလေိမျ့မယျ။ အတုနဲ့ပဲ ပွီးနလေိမျ့မယျ။ အစဈရောကျအောငျ ထိုးဖောကျပတေော့။
မေး ။ ကောငျးပါပွီ ဆရာကွီး။
ဖွေ ။ အောငျမွငျအောငျ ဖောကျနျော —
မေး ။ အောငျမွငျအောငျကို ဖောကျပါ့မယျ ဆရာကွီး။ အပွတျအသတျ လုပျပါ့မယျ ဆရာကွီး။
ဖွေ ။ အေး အပွတျအသတျ အောငျပှဲခံခငျြရငျ အပွတျအသတျ လုပျရတာပေါ့။
မေး ။ ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာကွီး။
Tags: ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ဓမ္မာနုပဿနာ, နိဗ္ဗာန်
စာရေးသူ ပဋိပတ္တိသာသနာပြုစဉ်က ရဟန်းသံဃာများ၊ သီလရှင်များနှင့် ယောဂီများ တော်တော်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါ စာရေးသူရဲ့ ကုသိုလ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပဋိပတ္တိသာသနာမှာ တစ်ခေတ်ဆန်း သကဲ့သို့ပဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စာရေးသူလည်း ဆရာကောင်းတပည့် ပန်းကောင်းပန် ဆိုသလို – ဆရာကောင်း သမားကောင်းရဲ့ အဆိုအဆုံးအမတည်ပြီး – Continue reading →
Tags: Buddhism, Myanmar Posts
မေး ။ ကျွန်တော် လောကဓံတွေ တွေ့နေလို့ ဆရာကြီးရယ် နည်းနည်းကြန့်ကြာ သွားတယ်။
ဖြေ ။ ရုပ်နာမ်ရှိရင် လောကဓံ ရှိမှာပေါ့။
မေး ။ ဆရာကြီး ကျွန်တော် တရားအားထုတ် နေရဲ့သားနဲ့ကို လောကဓံရှိတယ်။
ဖြေ။ ဟာ တရားအားထုတ်တာက တရားရဖို့ပဲလေ။ ရုပ်နာမ်ရှိတာကတော့ လောကဓံကို ဖြစ်စေမှာပဲ။ တရားရှိတော့ ခံသာတာပေါ့။ ရုပ်နာမ်ရှိနေသမျှ လောကဓံရှိမယ်လို့ တရားသေ တွက်ထား။ လောကဓံအကြောင်းကတော့ Continue reading →
ယုံကြည်မှုဆိုတာ ရာနှုန်းအနည်းအများတော့ ရှိတာပါပဲ။ တိုင်းတာတဲ့ ပေတံကတော့ ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ဟာ လုပ်ဖို့နဲ့၊ ကျန်တဲ့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို လုပ်ဖို့ ယှဉ်လာရင် ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ဘက်ကို လိုက်ရင် – ဒါ ယုံကြည်တာပေါ့။
ယုံကြည်ပေမယ့် ဖြစ်ချင်တာဘက်ကို လိုက်သွားတော့လည်း ယုံကြည်မှု အားနည်းတာပေါ့။ ယုံကြည်ခြင်းကတော့ လျော့နည်းတိုးဆုတ် ရှိကြမှာပါ။
ကျွန်တော် တရားလိုက်တယ်၊ ဆရာကောင်းကို ဖူးတွေ့ရတယ်၊ နည်းနိသျှတွေ Continue reading →
ဖွားစန်းက စီမံကိန်း အောင်မြင်သွားတဲ့သဘောပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) (၄) (၅) နှစ် ကတည်းက တရားကို အကြိတ်အနယ် ရှုနေတာ၊ တရားမှ တရားပဲ။ စားတာသောက်တာလေး အချိန်ပေးပြီး တရားမှ တရားပဲလုပ်တာ။ တစ်ချိန်ကျတော့ သူတော်တော် ရှုနိုင်သွားပြီး အောင်မြင်သွားပုံရတယ်၊ အောင်မြင်လည်း အောင်မြင်ရော သူက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ အကြောင်းကို မပြုတော့ဘူး၊ ထည့်လည်း မတွက်တော့ဘူး၊ စဉ်းလည်း မစဉ်းစားတော့ဘူး၊ ဝေလည်း မဝေဖန်ဘူး။ ဘာကောက်ချက်မှလည်း မပေးဘူး။ သူ့ခန္ဓာကို စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ပဲ။ နေသွားတာပေါ့။
နေတဲ့အခါ – သူက တရားကို အရင်ရှုတဲ့အခါကျ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်မ၀င်စားဘဲလည်း Continue reading →
စာရေးသူတို့အဖွဲ့ အခုတစ်လောတော့ ဖွားစန်းအကြောင်းကိုပဲ ပြောပြနေဖြစ်တယ်။
ဖွားစန်း အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ အဖွဲ့က ၀ိုင်းပြီးသာဓုခေါ်ကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အပြင် ပရိသတ်အတွက်ပါ အနည်းငယ် ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဖွားစန်း အောင်မြင်တယ် ဆိုတာက ဒီခေတ်မှာ ပဋိပတ္တိအောင်မြင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားတယ် ဒါကြောင့် တစ်ချို့ နားလည်နိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ နားလည်နိုင်အောင် ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် –
(၁) ပဋိပတ္တိကို မလုပ်ကြဘူး၊ လုပ်ကိုမလုပ်ကြဘူး၊ မကျင့်ဘူး
(၂) ကျင့်တယ် ဇွဲမရှိဘူး၊ စနစ်မရှိဘူး၊ ဆရာကောင်း မရှိဘူး။ ဒီအခါမှာ မရကြဘူးပေါ့။
တကယ်တော့ မြတ်စွာဘုရား သာသနာမှာ စနစ်ရှိမယ်၊ ဇွဲရှိမယ်၊ ဆရာကောင်းရှိမယ်ဆို Continue reading →
မမျိုးက ဖွားစန်း အကြောင်းရေးတော့ ကျွန်တော်ကလည်း အမြွက်မျှ ရေးချင်လာပါတယ်။
ဖွားစန်းဟာ တော်တော် တော်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ ခန္ဓာမစွန့်ခင် (၃) (၄) နှစ် ကတည်းက တရားမှ တရား ဆိုပြီးတော့ အားထုတ်သွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ တော်တော် ထူးခြားတဲ့ အချက်အလက်ပါ။ (၃) (၄) နှစ် တော်တော် ပြင်ဆင်တဲ့အခါကျတော့ ခန္ဓာစွန့်ကာနီးကျ သူ့မှာ အကြွေးမရှိတော့တဲ့ သဘောပါပဲ။ သူ့မှာ ရှင်းနေတာပေါ့။ ဒီတော့ ဘာမှ မလိုဘူးပေါ့ – အသက်ကလည်း (၈၀) ကျော်ပြီဆိုတော့ တစ်ခြား ကိစ္စ၀ိစ္စတွေလည်း မလိုတော့ဘူး ဆိုပြီးတော့ ခန္ဓာနဲ့ တရားနဲ့ပဲ ရှုသတ်ရင်းနဲ့ သေခြင်းတရားကို အောင်နိုင်သွားတာ အံသြစရာပါ။
အံသြစရာပါပဲ – ဒါကတော့ ရှာမှရှားပဲ မရှိပါဘူး။ တရားကို အဲဒီလောက် ယုံကြည်လေးစားပြီး နှလုံးသွင်း နေနိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဆို နောက် (၃) (၄) Continue reading →